Muqdisho oo maanta laga xusay sannadguuradii 11aad ee aasaaskii Puntland. [Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho oo maanta laga xusay sannadguuradii 11aad ee aasaaskii Puntland. [Akhris …]
Agoosto 2, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 02 – Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munsaabad si wacan loo soo maareeyey oo ay ka qayb galeen xubno iskugu jira golayaasha dowladda Soomaaliya, taasoo ku aaddan xuska 11aad ee ka soo wareegey markii dhidibada loo taagay maamulka Puntland muddo imika laga tiriyo 11 sanadood.
Wusuro ka tirsan dowladda Somaliya, mudanayaal baarlamaan, marti sharaf kale oo ka wada qayb galay munaasabaddaas ayaa intuba halkaas ka muujiyay guusha Puntland ay ku higsanayso 11 sanadood oo ay ahayd hoy nabdoon oo ka samatobaxay colaadihii ay Soomaalidu qoonsatay, waxana dhammaan xubnihii ka hadlay qudbadihii halkaas laga jeediyay ay Ilaah uga baryeen Puntland in ay samo ku waarto, kuna ammaaneen ahaanshaha hoy Soomaaliyeed oo ay ummaddu ku wada hirteen.
Munaasabaddan ayaa ahayd mid jawi nabdoon ku dhacday, waxana ay ku dhammaatay farxad iyo raynrayn.
Muranka siyaasadeed ee maamulka Somaliland oo maraya meel xasaasi ah. [Akhris …]
M/weyne Shariif & R/wasaare Sharmaarke oo khadka isgaadhsiinta kaga qayb qaatay xuska sannadguurada 11-aad ee Puntland. [Akhris …]